Wrike: Ampitomboy ny famokarana, ny fiaraha-miasa ary ampidiro ny famokarana atiny | Martech Zone
Tsy azoko antoka izay ho vitantsika raha tsy misy a sehatra fiaraha-miasa ho an'ny famokarana atiny. Rehefa miasa amin'ny infografika, taratasy fotsy, ary na dia bilaogy aza izahay, dia mifindra avy amin'ny mpikaroka, mankany amin'ny mpanoratra, hatrany amin'ny mpamorona, any amin'ny tonian-dahatsoratra sy ny mpanjifanay ny fizotrantsika. Betsaka loatra ny olona tafiditra amin'ny fandefasana rakitra etsy sy eroa eo amin'ny Google Docs, DropBox na mailaka. Mila fanodinana sy fanovana izahay mba handrosoana ny fandrosoana amin'ireo tetikasa am-polony am-perinasa.
Wrike namboarina manokana ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny atiny - miasa ho ivon-toerana foibe hitantanana ny haren'olombelona ary koa hiaraka amin'ireo fotodrafitrasa ivelany. Ireo fiasa dia ahitana:
Andraikitra asa - Alamino izay rehetra ilainao mba hamita ny tetikasanao amin'ny toerana iray. Vahao ireo tanjona lehibe ho lasa faritra azo tanterahina, apetaho ireo rakitra ary apetraho ny daty voatondro. Araho mora foana ny fandrosoana amin'ny ankapobeny sy ny fandraisan'anjaran'ny tsirairay.
Fifandraisana - @mention ireo ekipa ilainao hamita ilay asa ary ho hitan'izy ireo eo noho eo eo amin'ny sehatr'izy ireo ny hafatrao. Azonao atao koa ny mampiditra mpampiasa avy ivelan'ny orinasanao.
Famokarana mailaka - Miaraka amin'ny tsindry iray dia manova mailaka ho lasa lahasa iray ianao ary mandefa azy io hiverina any amin'ny Wrike raha hanao hetsika.
Dashboards - Mamorona fomba fijery azo ovaina momba ireo tetikasa manan-danja indrindra izay misy ny kisary, ny satan'ny lahasa ary ny fanavaozana ny fotoana tena izy.
newsfeed - Ny fanavaozana ny hetsika atao amin'ny tetikasa rehetra dia manome tatitra momba ny toe-javatra eo noho eo ary manapaka ny fivoriana sy ny fifandraisana amin'ny mailaka amin'ny antsasany mba hahafahanao mifantoka amin'ireo zavatra manan-danja.
Fanontana ekipa - Manova, mizara ary miara-miasa amin'ny antontan-taratasy an-tserasera sy amin'ny fotoana tena miaraka amin'ny ekipanao.
Mifehy ny fidirana - Ny fanomezana ny haavon'ny fifehezana fidirana, ny famoronana vondrona mpampiasa manokana ary ny fizarana fividianana antontan-taratasy dia manome antoka fa ny olona marina dia mahazo ny mombamomba azy ireo hahomby.
Fandehanana miasa manokana - Ampidino ny fizotranao ary mahazoa fahitana amin'ny asa isaky ny dingana. Mamorona ny fizotranao manokana miaraka amin'ny fizotran'ny fankatoavana.
Saha manokana - Ampio ny sahaninao manokana amin'ny tetikasa na asa rehetra ary araho izay tena zava-dehibe amin'ny orinasanao.
Resource Management - Mampifandanja ireo loharano ary manaraha ny zava-bita amin'ny alàlan'ny tabilao mandoro.
Time Tracking - Araho ny fotoana lanin'ny tetikasa na ny mpikambana ao amin'ny ekipa amin'ny fanaovana drafitra marina sy fitantanana teti-bola.
Calendar Integration - Ampifanaraho ny lahasa sy ny diaben'ny tetikasa amin'ny kalandrie rehetra ao anatin'izany ny Google Calendar, Outlook Calendar, ary iCalendar.
Fangatahana finday - Wrike dia samy manana Android sy iOS Applications ho anao ahafahanao manara-maso sy manatanteraka asa na dia lavitra ny latabatrao aza ianao.
Mba hampiroboroboana ny vokatrao dia azonao atao ny manao kopia tetikasa iray, mandika ireo asa nampanaovina anao ary na ny daty aza.
Wrike koa dia manolotra fampidirana amin'ny Google Apps, Chrome, Dropbox, Box, Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft OneDrive, SAML, Salesforce, iCal, Zapier, Evernote, Wufoo, HipChat, WordPress, Slack (izay tianay), Zendesk, Hubspot, Quickbooks, LinkedIn, Marketo, ProofHQ, Harvest, SurveyMonkey, Okta, ary Bitium!
Midira amin'ny fitsapana maimaim-poana amin'ny Wrike
Fanamarihana kely fotsiny - mampiasa rohy afiliana ato amin'ity lahatsoratra ity izahay.
Tags: bitiumBoxChromefiaraha-miasa amin'ny atinyfamokarana atinyasa atinyworkflow atinyworkflows atinyDropboxEvernotegoogle appsfijinjanaHipchathubspoticalLinkedInmarketoMicrosoft ExcelMicrosoft OneDriveMicrosoft ProjectoktaproofhqquickbookssalesforceSAMLhiahotrahoranareoSurveyMonkeyWordPressWrikewufoozapperzendesk